နောက်ဆုံးသောကာလ၌ စာတန်မာန်နတ်၏အမျက်ဒေါသ | The Wrath of Satan in the Last Days | Real Conversion
၂၀၁၃၊ ဒီဇင်ဘာ ၈ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော် ၊ သခင်ဘုရားနေ့ နံနက် ပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသောဒေသနာတော်။
]]အကြောင်းမူကား၊ မာန်နတ်သည် မိမိအချိန်ခဏသာ ရှိသည်ကိုသိ၍ ပြင်းစွာသောဒေါသ အမျက်နှင့်တကွ သင်တို့ရှိရာသို့ ဆင်းလေပြီဟု ဆိုကြသည်ကို ငါကြား၏}} (ဗျာဒိတ် ၁၂း၁၂)။
မာန်နတ်ရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်အမှန်ယုံကြည်ပါသည်။ ထိုမာန်နတ်၏နာမည် သမ္မာကျမ်းစာ၌ ၁၂မျိုးဖော် ပြထားသည်။ ဝိညာဉ်ဆိုး၊ နဂါး၊ မြွေဆိုး၊ ဗေလဇေဗုလ၊ လူစီဖါ၊ ဆိုးသွန်းသောသူ၊ သွေးဆောင်ဖြား ယောင်းသူ၊ ဤလောက၏ဘုရား၊ ကောင်းကင်၌ကျက်စားသော တန်ခိုးရှင်နှင့် လောက၏ဘုရင်ဟု အမျိုး မျိုးခေါ်တွင်ကြသည်။ စာတန်မာန်နတ်အကြောင်း ရယ်မောစရာအဖြစ် မပြောသင့်၊ လျှော့ပေါ့၍ မထင် သင့်ပေ။ သူ၌ကြီးမားသော တန်ခိုးရှိသည်။ လူတို့တီတွင်ကြသော လက်နတ်ထက်ပင် တန်ခိုးကြီးကြောင်း သိထားရမည်။ အကာသကောင်းကင်ကို အစိုးရ၏။ ဤလောကမြေကြီးကိုလည်း အစိုးရသည်။ ထိုမာန် နတ်၏ လုပ်ဆောင်ချက်သည် ဘုရားသခင်၏ နုတ်ကပတ်တော်ကို ဖုံးကွယ်ရန်ဖြစ်ပြီး၊ ဆုတောင်းခြင်း အဖြေမရအောင် တားဆီးနေသည်။ ခရစ်တော်၏ ဒုတိယကြွလာခြင်းကို နှောင်းနှေးစေသည်။ သန့်ရှင်း သော ဝိညာဉ်တော်ကို ဆန့်ကျင်နေသည်။ ဝိညာဉ်နိုးထမှုကို တားဆီးသည်။ ဘုရားဖန်ဆင်းသော လူ့ဘ၀ကို ပျက်သုန်းအောင် ဖျက်ဆီးနေသည်။ မာန်နတ်ဆိုးသည် ကြောက်လန့်ဖွယ်၊ ရက်စက်မုန်းတီး သူဖြစ်သည်။ ဖန်ဆင်းခံ သတ္တဝါတို့အား ညှိ့ယူဖမ်းဆီးဖို့ရန် ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ သို့ပါသော် လည်း ထိုမာန်နတ်ဆိုးသည် သားကောင်ကို ဖမ်းဆီးပြီးသောအခါ ကြောက်လန့်ဖွယ် မြွေဆိုးနဂါးကြီး သဏ္ဍာန် ပြောင်းလဲမြဲဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ရွှေးချယ်ထားသော ကျမ်းပိုဒ်က နောက်ဆုံးသော ကာလတစ်ခုကို ဖော်ပြနေသည်၊ ယောဘ ကျမ်း၌ မိန့်တော်ထားသကဲ့သို့ စာတန်မာန်နတ်သည် ဘုရားသခင်အထံတော်သို့ ချဉ်းကပ်ခွင့်ရရှိတော့ မည် မဟုတ်တော့ချေ။ အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း စာတန်သည် ကောင်းကင်ဘုရားသခင် ရှေ့တော် မှောက် အထိသွားလာခွင့်ရှိသည်။ သို့သော် များမကြာမှီ စာတန်ကြီးအား မှောင်မိုက်သံကြိုးဖြင့် ချည် နှောင်ထားပြီး ချူပ်ထားတော့မည်ကို သူသိထားပါသည်။ ဂျေ.အေ ဆက်စ်က သူ၏ကျမ်းအနက်ဖွင့်၌ ဗျာဒိတ်ကျမ်းကို အောက်ပါအတိုင်း ပုံဖော်ရေးသားခဲ့သည်။
ကောင်းကင်တွင် မာန်နတ်စစ်ရှုံးရခြင်းသည် ဘုရားသခင်နှင့် သူ၏လူတို့ကို ညှင်းဆဲခြင်း၊ နှိပ် စက်ခြင်းမှ နောက်ထပ် ဘယ်တော့မှ ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခြင်း မပြုနိုင်တော့ရန်ဖြစ်သည်။ စာတန်သည် လုံး၀ဥဿုံပျက်စီးနေပြီ၊ ဘယ်အရာကိုမျှပြုနိုင်စွမ်း မရှိတော့ပါ။ ထိုပျက်စီးခြင်းမှ ပြန်လည်၍ ကုသနိုင်ခြင်းလည်း မရှိတော့ပါ။ ကောင်းကင်ဘုံမှ စစ်ရှုံး၍ ဤလောကသို့ နှင်ချ ခံရခြင်းကား ဤလောက၌ အမျက်ထွက်ရုံမျှသာ ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ ပျက်ဆီးခြင်း ဖျောက်ပြန် ခြင်းသာ ပို၍တိုးလာပြီး မသိမကြုံဖူးသော အရာများ ဖန်တီးနေပေလိမ့်မည်။ (J. A. Seiss, The Apocalypse: Lectures on the Book of Revelation, Zondervan Publishing House, no date, p. 313).
ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ် ဓမ္မဗေဒပညာရှင် ဒေါက်တာ တိမောသေလင်း ထံ ကျွန်ုပ် သမ္မာကျမ်းစာကို သင် ကြားခဲ့စဉ် မာန်နတ်၏ တိုက်ခိုက်ခြင်းပို၍ ခံခဲ့ရပါသည်။ ဒေါက်တာ လင်းသည် ယုံကြည်ခြင်းဓမ္မကော လိပ်မှ မာစတာဘွဲ့နှစ်ခု ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သည်။ သူသည် ဏ့.D. ဘွဲ့ကိုလည်း ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနှင့် ပါတ်သတ်သော ကျမ်းစကားလေ့လာရန် ဟေဗြဲဘာသာစကားကို ဟေဗြဲဘာသာ စကားကောလိပ်ကျောင်းမှ သင်ယူခဲ့သည်။ ကောနက်ဘာသာစကားကို ဒရောဆက်စ် တက္ကသိုလ်မှ သင်ယူခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူသည် ဘောတ်ဂျုံး တက္ကသိုလ်၌ ကျောင်းဆရာအဖြစ် သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ တာဘောက် ဓမ္မကျမ်းစာကျောင်း၌၎င်း၊ ထရိနီတီ ဧဝံဂေလိကယ် ဓမ္မကျောင်း၊ ဒီးဖီးလ် အီလွီနှိုက်၌ ဓမ္မ သစ်ကျမ်းကို ဘာသာပြန်ဆိုပေးခဲ့သည်။ ၁၉၈၀မှ ၁၉၉၀အထိ တိုင်ဝမ်ရှိ၊ တရုတ်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း ပြန့်ပွားရေး ဥက္ကဌအဖြစ်၊ ဒေါက်တာ ဂျိမ်းဟတ်ဆန် တေလာ ပြီးနောက် အမှုဆောင်ခဲ့ပါသည်။ လောစ် အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့ ပထမနှစ်ခြင်းအသင်းတော်၌ ကျွန်ုပ်၏ သင်းအုပ်ဆရာလည်းဖြစ်၊ ကျွန်ုပ်ကို ကျမ်းစာ ၂၃နှစ်တိုင်တိုင် သင်ကြားပေးသောဆရာ တပါးလည်းဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၇၂၊ ဇူလိုင်လ ၂ရက်နေ့တွင် ဆရာက ကျွန်ုပ်အား နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပေးပြီးနောက်၊ လက်တင်မင်္ဂလာပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
သို့သော် ဒေါက်တာလင်းသည် ခြောက်သွေ့သော ဖုန်မုန့် ဓမ္မပညာရှင်တဦးမဟုတ်ခဲ့ပါ။ သူ၏ကျမ်း စာသင်ခန်းစာနှင့် တရားဒေသနာတော်သည် အသက်ရှင်၍ တန်ခိုးနှင့်ပြည့်စုံနေပါသည်။ နောက်ဆုံးသော ကာလအကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံထားသကဲ့သို့ ထိုဆရာလည်း လက်ခံယုံကြည်သူဖြစ်ပါသည်။ သူရေး သားသော ကျမ်းစကားတော်တော်များများ မရှိသော်လည်း၊ အသင်းတော်ကြီးထွားခြင်း ဟူသောစာအုပ်ထဲ က အချို့စာကြောင်းများ ဖြစ်ကြသော “စာမျက်နှာ ၆၊ နောက်ဆုံးသောကာလ၌ အသင်းတော်ထဲတွင် ယုံကြည်မှုမှားယွင်းခြင်း၊ စာမျက်နှာ ၁၁တွင် နောက်ဆုံးသော တရားစီရင်နေ့၊ စာမျက်နှာ ၇ နောက်ဆုံး သောကာလ၌ ယုံကြည်ခြင်းကင်းမဲ့ကြမည်၊ ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်နေကြမည်၊ စာမျက်နှာ ၂၁ နောက်ဆုံး သောကာလ၌ သင်းအုပ်ဆရာများဖျောက်ပြန်ပြီး အသင်းတော်သည်လည်း အေးစက်လာမည်၊ စာမျက်နှာ ၂၉တွင်၊ နောက်ဆုံးသောကာလ၌ အထက်ပါအကြောင်းအရာကို အသင်းတော်သည် သုံးကြိမ်ဆင်ခြင်လိမ့် မည်။ စာမျက်နှာ ၄၈၊ ၄၉တွင် နောက်ဆုံးသောကာလ အသင်းတော်တို့သည် တာဝန်အသိစိတ်ကင်းမဲ့ကြ မည်၊ ငွေကြေးကိုသာ အဓိကရှာဖွေလာကြမည်၊ စာမျက်နှာ ၅၀တွင်၊ အမှန်^မှား နှစ်မျိုးခွဲခြားမှု အား နည်းလာကြမည်။ စာမျက်နှာတွင် ဆုတောင်းခြင်း၌လည်း နှစ်မျိုးနှစ်စား အသွင်ပြောင်းလာမည်၊ (ဒေါက် တာ တိမောတေလင်း၏စာအုပ်မှ ကိုးကားထားပါသည်၊ (Timothy Lin, Ph.D., The Secret of Church Growth, FCBC, 1992).
ဒေါက်တာ တိမောတေလင်း၏ ကြိုတင်ပြောစကားအတိုင်း ဤနောက်ဆုံးသော အသင်းတော်ကာလ သည် ကပ်ကမ္ဘာအဆုံး၌ တည်ရှိသဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့လည်း နောက်ဆုံးသောကာလ၌ အသက်ရှင်ကြသည်ကို သင်သိမြင်နိုင်သည်။ နောက်ထပ် တိမောတေလင်း ဟောကြားသည်မှာ၊ မာန်နတ်သည် အမှန်တကယ်ရှိ သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ဤအရာနှစ်ခုကို သူ၏တရားဒေသနာ၌သော်၎င်း၊ ကျမ်းသင်ခန်းစာ၌သော်လည်း ကောင်း၊ ထပ်ခါထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါသည်။ နောက်ဆုံးသောကာလ၌ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသက်ရှင်နေ ကြသဖြင့် စတန်မာန်နတ်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေပါသည်။ ဤဆန့်ကျင်ခြင်းဖြင့် အသင်းတော်သည် ဖိစီးခြင်းခံရသည်ဟု သင်ထင်ကောင်းထင်နေပါလိမ့်မည်။ နှောက်ယှက်ခြင်းသည် အမှန်ပင်ဖြစ်သည်µ သူ၏အသင်းတော်သည်လည်း ကြီးမားစွာ နိုးထလှုပ်ရှားနေပေမည်။ အချိန်တိုအတွင်း လူပေါင်း ၂၀၀၀အသင်းဝင်နိုင်ပေါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ရွှေးချယ်ထားသောကျမ်းကို ဒေါက်တာလင်းက တရားဟောရာတွင်၊ ကျမ်းစာသင်ရာတွင် မကြာခဏအသုံးပြုခဲ့သည်။
“အကြောင်းမူကား၊ မာန်နတ်သည် မိမိအချိန်ခဏသာ ရှိသည်ကိုသိ၍ ပြင်းစွာသော ဒေါသအမျက်နှင့်တကွ သင်တို့ရှိရာသို့ ဆင်းလေပြီဟု ဆိုကြသည်ကို ငါကြား၏” (ဗျာဒိတ် ၁၂း၁၂)။
၎င်းကျမ်းပိုဒ်ကို ဒေါက်တာလင်းက မှတ်ချက်ပေးထားသည်မှာ၊
စာတန်မာန်နတ်က မိမိ၏အချိန်နာရီများစွာရှိသည်ကို ခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်း ဖြင့် ကန့်သတ်ပေးလိုက်သည်ကို သိထား၍ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် စာတန်သည် ယေရှု ခရစ်တော်ကို လက်ခံယုံကြည်နေကြသော သူတို့အား ဖျက်ဆီးနှောက်ယှက်ရန် ဝိညာဉ်ဆိုးများ ကို နေရာအနှံ့ စေလွတ်ထားသည်။ စာတန်၏ ဒုတိယခြေလှမ်းအနေဖြင့် ဆုတောင်းအားထုတ် နေသောသူတို့ကို နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးရန် ကြိုးစားနေပါသည်။ ဒုတိယကြွလာဖို့ရန် နီးကပ်နေ ပါသဖြင့် စတန်သည်လည်း တန်ခိုးအရှိန်နှင့် ဆုတောင်းခြင်းကို ဆန့်ကျင်နေပါသည်။ (Lin, ibid., pp. 95, 96).
အချို့သော တရားဟောဆရာတို့သည် ခရစ်တော်၏ ဒုတိယကြွလာခြင်း၏ “နိမိတ်လက္ခဏာ”များကို မသိနားမလည်ကြချေ။ အကြောင်းမှာ စတန်သည် သူတို့ထက်ပါးနပ်၍ ဖြစ်သည်။ စာတန်က ဣသရေလ လူတို့ ပြန်လည်၍စုရုံးနေကြသည်ကို သိထားပြီးဖြစ်သည်။ စာတန်သည် အသင်းတော်၌ ဖေါက်ပြန်နေကြ သည်ကို သိမြင်နေပါသည်။ နောဧ၏နေ့ရက်ကဲ့သို့ အသင်းတော်၌ ပျက်ဆီးနေသည်ကို သိမြင်နေပါ သည်။ စာတန်သည် မိမိ၏နေ့ရက်ကာလခဏသာ ရှိသည်ကို သိသဖြင့်၊ ဤလောက၌ ဘုရားသခင်၏ အလုပ်ကို တားဆီးနေမည်ဖြစ်သည်။
ဝိညာဉ်ဆိုး၏အခြားနာမည်ကား၊ “စာတန်”ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသော အဓိပ္ပါယ်မှာ “ရန်သူ” (သို့) “ဆန့် ကျင်သောသူ”ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် စာတန်သည် ဘုရားသခင်၏အလုပ်ကို နှောင့်ယှက်ဆန့်ကျင် နေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သော ဤနောက်ဆုံးကာလ၌ စာတန်သည် ယုံကြည်သူနှင့် မယုံကြည်သူတွေ တို့ပါ နှောက်ယှက်နေပါသည်။
၁။ ပထမ၊ စာတန်သည် ယုံကြည်သူတို့၏ ဆုတောင်းခြင်းကို နှောင့်ယှက်နေသည်။
စာတန်မာန်နတ်၏ အလုပ်သည် ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတို့၏ ဆုတောင်းခြင်းတည်းဟူသော ဘုရား သခင်၏အမှုတော်ကို ဆန့်ကျင်နေပါသည်။ ဒေါက်တာလင်း ပြောကြားသည်မှာ၊ “စာတန်မာန်နတ်သိ ထားသည်မှာ (ခရစ်ယာန်တို့ မသိသောအရာ) ဆုတောင်းခြင်းသည် ဘုရားသခင်အထံတော်က မစခြင်း ဂရုဏာတော်ကို ခံစားရယူဖို့နည်းလမ်းရှိသည်ကို သိသည်။ အကယ်၍ ခရစ်ယာန်တို့သည် ကြွယ်၀သော မစခြင်းကို မရရှိပါက သူတို့ဝိညာဉ်သည် မောပန်းပြီး ရင့်ကျင့်မှုရှိမည် မဟုတ်ကြောင်းကိုလည်း သိထား သည်။ ထို့ကြောင့် ခရစ်တော်သခင်၏ ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာဖို့ နီးနေသဖြင့် စာတန်သည် အမျက်ဒေါသ အရှိန်အဝါဖြင့် ဆုတောင်းခြင်းကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေပါသည်။ (Lin, ibid., p. 96).
ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတို့သည် မနက်စောစောအိပ်ရာထခြင်း၊ ဆုတောင်းဖို့မေ့တတ်ကြသည်။ ပဌာနာ တော်ရွှတ်ဆိုပြီး တစ်နေ့တာဘုရားသခင်၏ ကွယ်ကာမှု ရရှိဖို့အချိန်ခဏတာ ယူဆုတောင်းပါ။ ဘုရား သခင်၏မစခြင်းမရှိဘဲ ကျွန်ုပ်တို့ ကောင်းသောအရာမလုပ်နိုင်ကြပါ။ ထိုရာကို စာတန်သိနေပါသည်။ ထို့ ကြောင့် စာတန်သည် မနက်ပိုင်းအိပ်ရာထ ဆုတောင်းခြင်းကို တားဆီးသည်။ သင့်အား တစ်နေ့တာ တန်ဖိုးမဲ့၊ အသက်ရှင်စေလိုသည်။
စာတန်သည် “အားမလျှော့ဘဲ ကြိုးစားဆုတောင်း”ခြင်းကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေပါသည်။ အားမ လျှော့ဘဲ ဆုတောင်းခြင်းပုံဥပမာ၌ “မုဆိုးမ၏ မရရအောင်ဆုတောင်း”ခြင်းကို တွေ့ရသည်။ ထိုသို့ ဆု တောင်းခြင်းကို ဘုရားက ရှင်လုကာ ၁၈း၁၌ ဖော်ပြထားပါသည်။ “မရပ်မနား အစဉ်အမြဲဆုတောင်းရန် ဖြစ်သည်” “အရှုံးမပေးဘဲ အဖြေရသည်အထိ ဆုတောင်းခြင်း”ကို ဆိုလိုပါသည်။ ပုံဥပမာတွင်၊ သင့် လက်ဝယ် မရမချင်း၊ မရပ်မနားဘဲ ဘုရားသခင်ထံ တောင်းလျှောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ပုံဥပမာက အရမ်း ရိုးရှင်းပါသည်။ ထိုပုံဥပမာတွင်၊ မုဆိုးမသည် သူ၏ရန်သူကို မရမကလက်စားချေနိုင်သည်အထိ တရား သူကြီးထံ အပူတပြင်းတောင်းလျှောက်ခဲ့ပါသည်။ သည့်မတိုင်ခင် တရားသူကြီးက မုဆိုးမဘက်၌ အရေး တယူ မရှိခဲ့ပေ။ မရပ်မနား မုဆိုးမက တောင်းလျှောက်သောအခါ၊ အနှောက်အယှက်ပြုနေဦးမည် သူ့ဘက်၌ တရားစီရင်ပေးမည်ဟူ၍ တရားသူကြီး စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသည်အထိ တောင်းလျှောက်ခဲ့၏။ ဤပုံဥပမာအရ၊ “ဘုရားသခင်သည် မိမိလူတို့က နေ့စဉ်နေ့ညတောင်းလျှောက်သောအခါ၊ သူတို့ဘက် ၌ တရားမစီရင်ဘဲမနေ” (လုကာ ၁၈း၇)။ ဤအခန်း၏ နောက်ဆုံးအပိုဒ်၌ မိန့်တော်မူသည်မှာ၊
“ငါဆိုသည်ကား၊ သူတို့ဘက်၌ အလျှင်အမြန် တရားစီရင်တော်မူမည်။ သို့သော်လည်း လူ သားသည် ကြွလာသောအခါ ယုံကြည်ခြင်းကို မြေကြီးပေါ်မှာ တွေ့မည်လော့ဟု သခင်ဘုရား သည် မိန့်တော်မူ၏” (လုကာ ၁၈း၈)။
မည်သည့် ယုံကြည်ခြင်းမျိုးကို မဆို၊ ခရစ်တော်ပြန်လာလျှင် တွေ့မည်လားဟူ၍ ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ တစုံတခု လိုအပ်မှုအတွက် ကြိုးစား၍ဆုတောင်းခြင်းကို အရှုံးပေးခြင်းမျိုးကို ဆိုလိုသည်။ မိမိတို့လိုအပ် ချက် မရမကကြိုးစား၍ ဆုတောင်းရမည်ဖြစ်သည်µ “အားမလျှော့ဘဲ ဆုတောင်းခြင်း”သည် ယနေ့နောက် ဆုံးသောကာလ၌ တိမ်ကောနေမည်ကို ဆိုလိုသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် စာတန်မာန်နတ်သည် အမျက်ဒေါ သထွက်လျှက် ဆုတောင်းခြင်းကို တားဆီးနေပါသည်။ စာတန်သည် အသင်းတော်ကို အားနည်းစေပြီး ရွှေးချယ်ခံရသောသူတို့ ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ နှောင့်နှေးစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် စာတန်သည် မိမိ၏ အသက်တာကို ရှည်လျှားလိုသဖြင့်၊ ယနေ့ခေတ် ယုံကြည်သူများ၏ ဆုတောင်းသံကို တားဆီးနေပါ သည်µ
စာတန်မာန်နတ်က “ဆုတောင်းခြင်းသည် အရေးမကြီးဘူး၊ သင်းအုပ်ဆရာက ဆုamတင်းပါ၊ ဆုတောင်းပါ၊ ဆုတောင်းပါ ဟုပြောနေတယ်၊ သို့သော် ဒါကသင့်၏အချိန်ကို အလဟသဖြုန်းတီးနေတာ ဖြစ်တယ်၊ သင်၏ဆုတောင်းခြင်းသည် ထိရောက်မှုမရှိပါ။ အရှုံးပေးလိုက်ပါµ သင့်အချိန်နာရီကို မဖြုန်းပါ နဲ့ဟု ပြောနေသည်” ထိုသို့ သင်စိတ်ခံစားဖူးပါလား¿ ဆုတောင်းခြင်းဟာ အချိန်ကို ဖြုန်းတာပါ၊ ထိ ရောက်မှုမရှိဘူးဟူ၍ သင်တွေးဆခဲ့ဖူးပါသလား¿ ထိုသို့သင်ထင်မြင်နေလျှင် စိတ်နှလုံးသားထဲ စာတန် မာန်နတ် နှောက်ယှက်နေသဖြင့် အသေချာ ဂရုစိုက်ရမည်ကို သိရပါမည်။ စာတန်မာန်နတ်က အမျိုးမျိုး ကြိုးစားပြီး သင့်အားဆုတောင်းခြင်း ရပ်တန့်စေလိုသည်။ သင်၏ဆုတောင်းခြင်းကို ရပ်တန့်အောင် စာတန်မာန်နတ် အချိန်ယူကြိုးစားနေပါသည်။ ဘုရားသခင်ထံတော်က သနားခြင်းဂရုဏာ သင့်အပေါ် မသက်ရောက်ဖို့ သင်၏ဆုတောင်းခြင်းကို စာတန်တားဆီးနေပါသည်µ သမ္မာကျမ်းစာတော်၌ ရှင်ပေါလု မိန့်ကြားသည်မှာ၊
“သို့မဟုတ်လျှင် စာတန်သည် ငါတို့ကိုနိုင်မည်ဟု စိုးရိမ်စရာရှိ၏။ သူ၏အကြံအစည်များကို ငါတို့သိကြ၏”(၂ကော ၂း၁၁)။
စာတန်မာန်နတ်က အကယ်၍သင်သည် ဂရုတစိုက်ဆုတောင်းခြင်းမရှိသော် “လက်စားချေ”ဖျက်ဆီးလိမ့် မည်။ တမန်တော် ရှင်ပေါလု မိန့်တော်မူသည်ကား၊
“အကြောင်းမူကား၊ ဆုမတောင်းဘဲနေကြ၏” (ယာကုတ် ၄း၂)။
စာတန်မာန်နတ်၏ လှည့်ဖျားခြင်းကို ခံရသောကြောင့် ဆုတောင်းသော်လည်း “မရကြ”။ စာတန်သည် သင့်အား မျော်လင့်ချက်မဲ့သောသူ၊ စိတ်ဖိစီးမှု အမှန်ပင်ခံစားစေလိုသည်။ စာတန်သည် သင်ဆုတောင်း ခြင်း ရပ်တန့်သွားသည့်တိုင် နှောက်ယှက်တားဆီးနေမည်။ သတိထား ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူများ၊ စာတန် မာန်နတ်၏ ရန်စွယ်ကို ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့ အမြဲဆုတောင်း ပဌာနာပြုရပါမည်။ သတိရပါµ ဆုတောင်း ခြင်းသည် စစ်ပွဲတစ်ခုပဲµ ဓမ္မသီချင်းဟောင်း၌ သီကုံးထားသည်မှာ၊
ယေရှုသည် သင်၏ဆုတောင်းခြင်းကို မျော်နေ၏
ကတိတော်သည် သင့်ဝိညာဉ်အား ဖြည့်ဆည်းပေး
ကိုယ်တော်နှင့် တွေ့ဆုံသည့်တိုင် ဆုတောင်းပါသလား¿
ကယ်တင်အရှင် နာမဖြင့် ဆုတောင်းသလား¿
(၁၈၇၅-၁၉၄၉ ခုနှစ် ဒဗလျှူ.စီ ပူလ် သီကုံးသော “ကြိုစား၍ဆုတောင်းသလား¿”
သင်းအုပ် ဆရာမှ ပြင်ဆင်သီဆိုသည်)။
ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်၌ ဤသီချင်းသီဆိုသည်ကို ကြားဖူးပါသလား¿ တစ်ခါမှ မကြားဖူးခဲ့ပါµ ခရစ်ယာန်များ ၎င်းသီချင်းကို သီဆိုကြရမည်။ သို့သော် ၎င်းသီချင်းက ခေတ်ဟောင်းသီချင်းဖြစ်သည်။ “သို့သော် လူသားသည် ကြွလာသောအခါ ယုံကြည်ခြင်းကို မြေကြီးပေါ်မှာ တွေ့မည်လော့ဟု သခင် ဘုရားသည် မိန့်တော်မူ၏” (လုကာ ၁၈း၈)။
ဤကျမ်းကို သတိထားကြည့်ပါ။ ဒံယေလ အခန်းကြီးတစ်ဆယ်၌ ဒံယေလ၏ဆုတောင်းသံကို ဘုရား သခင်မည်သို့ကြား၍ ထူးတော်မူသည်ကို တွေ့ရသည် (ဒံယေလ ၁ဝး၁၂)။ သို့သော် အဖြေကို “ရက် ပေါင်းနှစ်ဆယ်အတွင်း မရရှိခဲ့ပေ။ အကြောင်းမှာ၊ မာန်နတ်က တားဆီးသောကြောင့် ဖြစ်သည်( ဒံယေလ ၁ဝး၁၃)။ ဘုရားသခင်အထံတော်က အဖြေရသည့်တိုင် စာတန်တားဆီးသည့်ကြားက ဇွဲမလျှော့ဘဲ ဆု တောင်းခဲ့သောဒံယေလ ကျွန်ုပ်ကျေးဇူးတင်ထိုက်သည်µ ဒေါက်တာ ဂျွန်အာရ်ရိုက်စ်၏ ဆုတောင်းခြင်း စာအုပ်၌ သီချင်းစာပိုဒ်ကို အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရသည်။
၂။ ဒုတိယ၊ ပျောက်ဆုံးသူတို့အတွက် ထာ၀ရအသက်ကို စာတန်က တားဆီးနေပါသည်။
“မာန်နတ်သည် မိမိအချိန်ခဏသာ ရှိသည်ကိုသိ၍ ပြင်းစွာသောဒေါသ အမျက်နှင့်တကွ သင်တို့ရှိရာသို့ ဆင်းလေပြီဟု ဆိုကြသည်ကို ငါကြား၏” (ဗျာဒိတ် ၁၂း၁၂)။
သင်သည် ထာ၀ရအသက်ကို ရှာသောအခါ၊ စာတန်ကတားဆီးနေမည်။ သင်ခရစ်ယာန်တစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ စာတန်မလိုလားပါ။ သင့်ထာ၀ရအသက်နှင့် ပါတ်သတ်၍ စာတန်မာန်နတ်က အစွမ်းကုန်ကြိုးစား ဖျက်ဆီးနေသည်။ အဘယ်ကြောင့် ထိုသို့စာတန်ကြိုးစားနေပါသလဲ¿ အကြောင်းတစ်ခုကတော့ လူလတ် သားတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ယေရှုမိန့်တော်မူသည်ကား “မာန်နတ်သည် ရှေ့ဦးစွာမှစ၍ လူအသတ်ကို သတ် သောသူဖြစ်၏” (ယောဟန် ၈း၄၄)။ လူသတ်ခြင်းကား စာတန်၏လုပ်ရပ်ပင်ဖြစ်သည်။ တားမြစ်ထား သောအသီးကို စားစေခြင်းဖြင့် ရှေ့ဦးစွာသော လူသားကို စာတန်က သတ်ဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ စာတန်သည် သင်နှင့်သင့်ဝိညာဉ်ကို သတ်ဖြတ်လိုသောသူဖြစ်သည်။ အသေသတ်ပြီး သင့်အားငရဲသို့ သွားစေလိုသည်။
အခြားသော အကြောင်းအရာကို ရောမ ၁၁း၂၅၌ ကျွန်ုပ်တို့ ဖတ်ကြည့်သော်၊
“တပါးအမျိုးတို့၏ အချိန်မပြည့်မှီတိုင်အောင်၊ ဣသရေလလူတို့၌ မှောင်မိုက်အချိန်ဖုံးလွမ်းခြင်း ဖြစ်သည်” (ရောမ ၁၁း၂၅)။
“ပြည့်စုံခြင်း” ကို ဂရိဘာသာစကားဖြင့် “စူနမသာa” မှ ဟုခေါ်သည်။ ဆိုလိုသောအဓိပ္ပာယ်မှာ “ပြည့်စုံ သောအချိန်”ဟု ဆိုလိုသည်။ စာတန်သည် ဣသရေလတို့ကို မုန်းတီးသည်၊ တပါးအမျိုးသားတို့၏ အချိန် “ပြည့်စုံချိန်” အထိ၊ ဣသရေလလူမျိုးများ မျက်စိကန်းနေကြသည်ကို စာတန်မာန်နတ်သိပါသည်။ ဣသရေလလူတို့ကို ကယ်တင်ခြင်းမရစေလိုပါ။ ဣသရေလတို့အား ကယ်တင်ခြင်းမရစေလိုခြင်းက အ ကြောင်းတရားတစ်ခု ဖြစ်သည်။
တပါးအမျိုးသားတို့အချိန် ပြည့်စုံသောအခါ၊ ဣသရေလလူတို့၏ ကယ်တင်ခြင်းနေ့ရက် ရောက်ရှိ လာပြီဖြစ်၍ ထိုသူတို့၏မျက်စိ ပွင့်လင်းလာပြီဖြစ်သဖြင့် ယနေ့သည် နောက်ဆုံးသောကာလသို့ ရောက်ရှိ လို့လာပါပြီ။ မာန်နတ်သည် ခရစ်တော်တဖန်ကြွလာသောအခါ၊ တရားစီရင်ခြင်းကိုခံရပြီး “နှစ်တစ် ထောင်” အချူပ်ခံရတော့မည်ကို သိထားပါသည်။ (ဗျာဒိတ် ၂ဝး၂) ထို့ကြောင့်
စာတန်သည် မိမိ၏အချိန်ခဏသာရှိသည်ကို သိသောကြောင့် ယနေ့ကမ္ဘာကြီးကို အမျက်ဒေါသနှင့် ကြိုးစား၍ဖျက်စီးနေသည်။ ထပ်ခါတလဲလဲ တစ်ပါးအမျိုးစားတို့၏ “ပြည့်စုံချိန်”ကို ကြန့်ကြာအောင် စာတန်မာန်နတ်ကြိုးစားနေပါသည်။ ယနေ့ဆိုလျှင် ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ ပို၍ပင်ခက်ခဲနေမည်ကို သိထား ရန်လိုပါသည်။ စာတန်သည် မိတ်ဆွေ၊ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတစ်ဦးဖြစ်လာဖို့၊ ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံ ကြည်သူမဖြစ်ဖို့ရန် ကြိုးစား၍တားဆီးနေပါလိမ့်မည်။ ဣသရေလလူတို့၏ မျက်စိကိုကန်းစေသကဲ့သို့ ယနေ့လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်။
သင်ကယ်တင်ခြင်းမရရှိဖို့ စာတန်၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် သင့်စိတ်နှလုံးသားထဲက နုတ်ကပတ်တော် ကို နုတ်ပစ်ရန်ဖြစ်သည်။ မျိုးစေ့ကြဲခြင်းပုံဥပမာတွင် ယေရှုမိန့်တော်မူသည်ကား၊
“ကယ်တင်ခြင်းသို့ မရောက်စေခြင်းငှါ၊ မာန်နတ်သည် တရားစကားကို နှလုံးသားထဲမှ နုတ်ယူ သောသူကို ဆိုလိုသတည်း” (လုကာ ၈း၁၂)။
လွန်ခဲ့သောတနင်္ဂနွေနေ့က တရုတ်လူငယ်လေးနှစ်ယောက် ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်သို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါ သည်။ ထိုသူနှစ်ဦးစလုံးကို မာန်နတ်က လွမ်းမိုးထားသည်။ ထိုသူနှစ်ယောက်ထဲက တစ်ဦးသည် ရုပ်တု ဆင်းတု ကိုးကွယ်၍ စာတန်၏ထိန်းချူပ်မှုအောက်သို့ ရောက်ရှိသူဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ယောက်သည် ဘယ်လိုပုံစံဖြင့် စာတန်လက်ထဲရောက်သွားသည်ကို ကျွန်ုပ်မသိပါ။ ထိုသူပြောကြားသည်မှာ စာတန်၏ ထိုးနှက်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်အလူးအလဲ ခံရသည်ဟု ဆိုသည်။
နှစ်ယောက်ထဲတစ်ယောက်သည် လွန်ခဲ့သောတနင်္ဂနွေနေ့က ကယ်တင်ခြင်းရရှိခဲ့သည်။ နောက်တစ် ယေက်က မရရှိခဲ့ပါ။ ကွာခြားချက်ကတော့ ကယ်တင်ခြင်းရရှိသောသူသည် ကျွန်ုပ်ဟောပြောသော တရား ဒေသနာတော်ကို နားထောင်ဖို့ ဆက်၍အသင်းတော်သို့ ရောက်ရှိလာပါသည်။ စာတန်၏ပြင်းထန် သော အမျက်ဒေါသဖြင့် ဘုရားကျောင်းမသွားဖို့ တားဆီးခြင်းခံရသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူး တော်ကြောင့် အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ဘုရားကျောင်းကို တက်ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် တနင်္ဂနွေနေ့နံနက်ပိုင်းဝတ်ပြုခြင်း အစည်းအဝေး၌ ဒေါက်တာချန်ဟောကြားသော တရားဒေသနာတော် ဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိခဲ့ပါသည်µ
ထို့နောက် နောက်တစ်ယောက် တရုတ်လူငယ်မှာ တရားဒေသနာတော်ကို နားမထောင်လိုချေ။ လွန်ခဲ့ သောတနင်္ဂနွေနေ့ ဝတ်ပြုအပြီး ထိုလူငယ်အား ကျွန်ုပ်ထပ်၍ ဝေငှပါသေးသည်။ အသင်းတော်ကို ဆက် လက်လာပြီး ကယ်တင်ခြင်းတရားနားထောင်ဖို့ ကျွန်ုပ်တိုက်တွန်းပါသေးသည်။ သို့သော် ခေါင်းမာလျှက် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ ထိုသူက စကားကြမ်းတမ်းလျှက် သမ္မာကျမ်းစာကို ကျွန်ုပ်တစ်ယောက်တည်းလည်း ဖတ် လို့ရပါတယ်ဟု ပြောခဲ့သေးသည်။ သူသည် ဒေါပွလျှက် မိမိအိမ်သို့ ကားမောင်းလျှက် ထွက်သွားခဲ့သည်။ သူထွက်သွားပြီးနောက် ကျွန်ုပ်သည် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိခဲ့ပါသည်။
အကယ်၍သင်သည်လည်း ကယ်တင်ခြင်းမရရှိသေးလျှင်၊ ထိုလူငယ်ကဲ့သို့ မဟုတ်ဘဲ မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချလျှက် နုတ်ကပတ်တော်ကို ခံယူစေလိုပါသည်။ စာတန်မာန်နတ်သည် သင်၏စိတ်ခံစားချက်ကို နားလည်သည်၊ မည်သို့တွေးတောနေသည်၊ မည်သို့ခံစားနေသည်ကို နားလည်သောကြောင့် သင့်စိတ် နှလုံးသားထဲက ဘုရားစကားကို နုတ်ယူနိုင်သည်µ သမ္မာကျမ်းစာ၌ လာသည်ကား၊
“ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ မိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချကြလော့၊ သို့ပြုလျှင် သင်တို့ကို ချီးမြောက်တော်မူ လိမ့်မည်” (ယာကုတ် ၄း၁၀)။
အချို့သောသူတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းမခံရဘဲလျှက် ဆက်လျှောက်အသက်ရှင်နေကြသည်။ မိမိသည် ဘာလုပ်မည်ကို သိသည်ဟု ဝါကြွားသေး၏။ သို့သော် သင်ဟာ အကုန်စင်သသော ပညာရှိတစ်ယောက် မဟုတ်ပါµ သင်ဘာလုပ်ရမည်ကို သင်မသိနိုင်ပါ။ ဤသို့ဖြင့် သင်ဟာစာတန်၏လက်အောက်မှ ရုန်းမ ထွက်နိုင်ဖြစ်နေသည်။ ဒီကနေ့မနက် သင့်အားတောင်းဆိုပါသည်။
ပြစ်မျိုးကင်းစင် စင်ကြယ်ရအံ့ငှါ စွန့်ပစ်မည်
ဆေးကြောမူလျှင် ဖြူမည်မှန်ပါ မိုးပွင့်ထက်
(၁၈၂၈-၁၈၉၆ခုနှစ်၊ ဂျိမ်းနီကောဆန် သီကုံးသော “မိုးပွင့်ထက်ဖြူစင်ခြင်းကျူး”)။
ယေရှုသည် သင့်အပြစ်အခအတွက် လက်ဝါးကားတိုင်တွင် အသေခံပေးဆပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သင့်အား ထာ၀ရအသက်ပေးဖို့ သေခြင်းမှ ကိုယ်တော်ချီးမြောက်ခဲ့ပြီ။ သခင့်ရှေ့တော်၌ နှိမ့်ချလျှက် ချဉ်းကပ်ပါ ကိုယ်တော် ချီးမြောက်တော်မူမည်µ ငါဘာမဆိုသိသည် ဟူသောစိတ်ကို ဘေးဖယ်လိုက်ပါ။ ထိုစဉ်ယေရှု သည် မိမိ၏အသွေးတော်ဖြင့် သင့်အားဆေးကြောပါလိမ့်မည်၊ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ချဉ်းကပ်ပါµ
အကယ်၍သင်သည် စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်လိုလျှင်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ဓမ္မဆွေးနွေးခန်းဆီသို့ လှမ်းလာခဲ့ကြပါ။ ဒေါက်တာ ကေကန်က ဦးဆောင်ပြီး ဆွေးနွေးပေးမည်။ ကောင်းကြီးခံဆုတောင်းပေးပါ လိမ့်မည်။ ယခုပင် ကြွလှမ်းကြပါ။ ဒေါက်တာ ချန်မှ ထိုဆွေးနွေးခန်းထဲသို့ သွားကြမည့်သူတို့အဖို့ ဆု တောင်းပေးပါမည်၊ အာမင်µ
-ဒေသနာမတိုင်ခင် မစ္စတာ အေဘေလ် ပရုတ်ဟုန်းမှ (ဗျာဒိတ် ၁၂း၇-၁၂) ကို ဖတ်ကြားပေးပါ သည်။
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျင်မင် ခင်ကိတ်ဂရိဖက်စ်မှ (၁၈၈၀-၁၉၅၅ ခုနှစ် ဟုန်မာ ရိုဒီဟဲဗာ သီကုံးရေးသားသော “ယေရှုကြွလာ ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုသည်)။
“အကြောင်းမူကား၊ မာန်နတ်သည် မိမိအချိန်ခဏသာ ရှိသည်ကိုသိ၍ ပြင်းစွာသောဒေါသ အမျက်နှင့်တကွ သင်တို့ရှိရာသို့ ဆင်းလေပြီဟု ဆိုကြသည်ကို ငါကြား၏” (ဗျာဒိတ် ၁၂း၁၂)။
(လုကာ ၁၈း၁၊ ၇၊ ၈)၊ (၂ကော ၂း၁၁)၊ (ယာကုတ် ၄း၂)၊ (ဒံယေလ ၁ဝး၁၂၊ ၁၃)။
၂။ ဒုတိယ၊ ပျောက်ဆုံးသူတို့အတွက် ထာ၀ရအသက်ကို စာတန်က တားဆီးနေပါသည်။ (ယောဟန် ၈း၄၄)၊ (ရောမ ၁၁း၂၅)၊ (ဗျာဒိတ် ၂ဝး၂)၊
(လုကာ ၈း၁၂)၊ (ယာကုတ် ၄း၁၀)။